युगसम्बाद साप्ताहिक - संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका
Sunday, 04.05.2020, 12:24am (GMT+5.5) Home Contact
संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका
Tuesday, 09.30.2014, 11:18am (GMT+5.5)
२०४६ साल अघिसम्म नेपालमा उद्देश्यमूलक पत्रकारिता चलेको थियो । त्यो उद्देश्य र अभियान भनेको मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो । अहिले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले ठूलो फड्को मारेको छ । पञ्चायतको समाप्तिको लागि भएको आन्दोलनको अढाई दशककै अवधिमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्याे तर गणतन्त्रले अहिलेसम्म संस्थागत हुन पाएको छैन । अर्थात् गणतन्त्र नेपालको संविधान बनिसकेको छैन । संविधान नबन्नुको कारण केही राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूको आग्रह–पूर्वाग्रह र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । यो फगत आरोप मात्र हैन विगत ६ वर्षयता देखिएको दृश्यले नै पुष्टि गर्दछ ।
अहिले मुलुकमा दोस्रो संविधानसभा चलिरहेको छ र सिंगो देशको एकसूत्रीय अभियान भनेको निर्धारित समय अर्थात् माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नु हो । तर अहिलेसम्मको गति हेर्दा संविधान लेखनमा नेताहरूको जिम्मेवारीबोध अझै हुन सकेको छैन । विगतमा जे जस्ता किचलो थिए अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ । विगतदेखि नै लाग्दैआएको सहमतिको नारा घन्केको घन्क्यै छ तर सहमतिको भ्यागुते धार्नी कहिले पुग्ने हो पत्तो छैन । संविधान निर्माण कार्यतालिका अनुसार सहमति गर्ने प्रयास भए पनि ठोस गति लिन सकेन । सहमति नभए विधि तथा प्रक्रियामा जाने भनिए पनि यसमा पनि विवाद छ । न सहमति हुने न प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने भएपछि कसरी संविधान बन्ला ? अहम् प्रश्न छ । यस्तोमा आम संचारको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुनेमा कसैको विमति छैन । दलको राजनीतिक आस्थामा बाँडिएर संगठित भएका पत्रकारहरूले अबको केही समय ती सब त्यागेर संविधान लेखनकै लागि मात्र आफ्नो अभियान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
आम संचारले अब संविधान निर्माणको वातावरण बनाउने र विमतिका बिरुद्ध सहमतिको हातेमालोमा नेताहरूलाई प्रेरित गर्ने तथा त्यसका लागि जनमत सिर्जना गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ । संचार माध्यममा आएका समाचार विवरण र टिप्पणी तथा विश्लेषणको कति छिटो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । तर अब संविधान बन्दैन, दलहरू फेरि पुरानै बाटोमा लागे जस्ता नकारात्मक टिप्पणीहरूको मात्र बढोत्तरी आइरहेको छ र यसमा स्पष्ट कुराको साटो दलीय आग्रह अनुसारको धारणा प्रवाह भैरहेको पाइन्छ । यसको अन्त्य गर्दै मुलुकको एकसूत्रीय अभियान संविधान लेखनलाई सघाउ पुग्ने सामग्री संचार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ।
संविधान लेखनका सवालमा संचार माध्यमहरूमा आउने विविध धारणा दलीय आग्रहप्रेरित हुने गरेको वरिष्ठ पत्रकारहरूको गुनासो छ । “आम संचार राज्यको चौथो अंग र समाजलाई सुसूचित पार्ने प्रभावकारी माध्यम भएकाले यस्तो संस्थाले नकारात्मक धारणा विकसित हुने भन्दा सकारात्मक सोचको विकास हुने विचार प्रवाह गर्नु परम दायित्व हो ।” एक पत्रकारको सुझाव छ ।
मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले यसको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुन्छ मुलुकले उति चाँडो निकास पाउँछ । यो वा त्यो बहानामा अस्थिरतालाई मात्र लम्ब्याइरहने हो भने मुलुकले कहिल्यै निकास पाउँदैन । विकासको कुरा त कता हो कता ? “नेपाली पत्रकारितामा पछिल्लो समय विकसित हुँदै आएको दलीय प्रतिस्पर्धाले पनि निष्पक्ष सूचना र विचार प्रवाहमा अवरोध पुर्याइरहेको छ” अर्का पत्रकार बताउँछन् । तर, सकारात्मक कुरा मात्र प्रवाह गर्ने भन्दैमा नेताहरूको गल्तीको ढाकछोप गरेर हुँदै नहुने र हुनै नसक्ने काम हुन्छ र हुँदैछ भन्नुपर्छ भन्ने होइन । मतलब के मात्र हो भने अन्धाधुन्दा आलोचना र आरोपभन्दा स्वस्थ आलोचना, स्वस्थ सुझाव प्रवाह गरौं । संविधान निर्माणको बाटोबाट विमुख हुन लागेकाहरूलाई फर्कन प्रेरित गर्ने खालका समाचार विवरण र विचार प्रवाह गरौं भन्ने मात्र हो ।
पत्रकारहरूको आफ्नो दायित्व, भूमिका र कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले यसलाई राज्यको एउटा जिम्मेवार अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको छ, त्यो जिम्मवारी संचार जगतले पूरा गर्नैपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो देखिंदैन । स्वतन्त्र पत्रकारिताको नाराभित्र दलीय डण्डा बर्सन थालेको छ यतिबेला । पत्रकारहरू विभिन्न राजनीतिक दलको भातृ संगठनका सदस्यका रुपमा सक्रिय भएर थुप्रै संगठनमा आबद्ध हुन पुगेका छन् । यस्तोमा सत्तापक्ष, विपक्ष, सडक पक्षहरूले सोही अनुसारको समाचार प्रवाह गर्ने भएकाले पनि आम जनता दिग्भ्रमित छन् । उनीहरूलाई मुलुकको भविष्य निर्धारणमा भैरहेको प्रगति र त्यो प्रगतिमा उत्पन्न अबरोधका बारेमा प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले सुसूचित गराउने दायित्व संचारको हो ।
पत्रकार आफैंमा अन्य पेशा–व्यवसायीको तुलनामा बढी सुसूचित, सूचनामाथि पहुँच र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमताका हुन्छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध भएर सोही अनुसारको पत्रकारिता गर्ने हो भने मुलुकको धेरै समस्याहरू समाधान हुनेछन् । यतिबेला समाचारको प्रभावकै कारण अनेक घटनाहरू उजागर भएका छन्, दोषीमाथि कारवाही भएको छ, पीडितले राहत पाएका छन् । पत्रकारिताको धर्म त्यो हो, जसले समाजको अधिकतम हित गर्छ त्यस्ता विषय वस्तुलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने । यतिबेला मुलुकको समग्र ध्यान संविधान लेखनतिरै भएकाले संविधान लेखनका विषयमा यथार्थ कुरा निष्पक्ष ढंगले प्रवाहित गर्नु नै पत्रकारिताको अहिलेको धर्म र लक्ष्य हो ।
त्यसो त ‘मिसन पत्रकारिता’मा अभ्यस्त नेपाली पत्रकारहरूको अहिले पनि त्यही अभियान जारी छ । मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तन भैसक्दा पनि पत्रकारिताको उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । संचार जगतको अभूतपूर्व विकास त भयो तर संचारको भूमिका सोही अनुसार स्पष्ट हुन सकेन । व्यावसायिक पत्रकारिताको धर्म भनेको पत्रकारिता पेशाको नैतिक मूल्य–मान्यता कायम गर्नु हो । यसको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्नु हो । व्यावसायिक भनेको नाफा–घाटा मात्र हैन, त्यसमा पनि पत्रकारिताले मुलुकलाई नाफा दिनुपर्छ भन्ने चेतनाबोध आम पत्रकारमा हुनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता त्यही हो ।
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको कामभन्दा गफ नै बढी (05.12.2014)
नारा र व्यवहारको बेमेल - यादब देवकोटा (05.05.2014)
धनी कतार : गरीबलाई कहर - यादब देवकोटा (04.28.2014)